निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै दाहाल-नेपाल निर्वाचन आयोग, के भन्यो आयोग ले ? – www.agnijwala.com
निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै दाहाल-नेपाल निर्वाचन आयोग, के भन्यो आयोग ले ?
२७ पुष २०७७, सोमबार १३:२९
निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको दाहाल-नेपाल समूह निर्वाचन आयोग पुगेको छ ।
काठमाडौं । निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको दाहाल-नेपाल समूह निर्वाचन आयोग पुगेको छ ।
संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्धा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आयोगले भने निर्वाचनको गतिविधि गर्न थालेपछि नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल, लिलामणि पोखरेल लगायत केही स्थायी कमिटी सदस्यहरु आयोग पुगेका हुन् ।
पार्टीको आधिकारिक पत्र लिएर निर्वाचन आयोग पुगेका उनीहरुले आयोगलाई निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि रोक्न सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीले गत पुस ५ गते संसद् विघटन गरेपछि पुनःस्थापनाकाे माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदनमाथी सुनुवाइ हुन बाँकी नै छ ।